Intel Dead Side Hack Hack Ukukopela, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
Intel DeadSide kugula
Indawo yasekunene ye-Intel ye-Intel iyakutshintsha indlela yakho yonke!
Phuhlisa uluvo lokuqhekeka ngokuluvavanya iiyure ezingama-24. Thenga imveliso yeentsuku ezi-1 namhlanje!
Olunye usuku alwanelanga kuninzi lwabasebenzisi bethu, olusengqiqweni. Thenga isitshixo semveliso yeveki e-1 namhlanje!
Ukufumana ukufikelela ixesha elide kwi-DeadSide ye-Intel. Thenga isitshixo semveliso yenyanga e-1 namhlanje!
Abanye abadlali baya kukhetha umdlalo wokudlala ngokuqhwanyaza, ngelixa abanye bezokuthatha indawo yokulwa. Nangona kunjalo uceba ukudlala, unokuthembela kwi-Deadside Intel Hack yethu yokugcina ulungele umlo!
Ulwazi oluFileyo lwe-IntelSide ye-Intel
Ilula kwaye kulula ukuyisebenzisa ii-hacks zolu bukhulu akukho lula ukuhlangana nazo, kodwa yile nto eyenza i-Gamepron ikhetheke kangaka! Xa ujonge i-DeadSide hack engenangqondo kwaphela (oko kuthetha ukuba awuzukuvalwa, nokuba lixesha lakho lokuqala), i-DeadSide Intel kukukopela kwakho. Uninzi lwethu lunamava amabi ngokugqogqa kwixa elidlulileyo, kwaye oko kudla ngokubangelwa kukusebenzisa izixhobo ezikumgangatho ophantsi. Sebenzisa ezona cheats zibalaseleyo ze-DeadSide ezikhoyo kwi-Intanethi kwaye usebenze kunye neGamepron! Nokuba yi-DeadSide Aimbot, i-ESP, iWallhack, okanye nayiphi na into oyifunayo, amathuba okuba sinayo.
Sebenzisa iRadar ukubhengeza indawo zeentshaba, kunye ne-ESP (Umdlali kunye noMxholo) ukuze ubone iindawo eziqinileyo. Bhangqa yonke loo nto kunye nokususwa kunye nokukhethwa kweAimbot kwaye uneyona mfihlo ilungileyo ye-DeadSide efumaneka kwi-intanethi! Umdlalo wegeron uyigubungele.
Ulwazi lutshaba (impilo, umgama, isixhobo, izidumbu)
Ukhetho oluncinci lokuhamba
Malunga ne-DeadSide Inte
I-DeadSide Intel yenzelwe kuphela oomatshini abasekwe kwi-Intel (kuphela i-CPU exhaswa), kodwa ngethamsanqa abo babalaseleyo. Ukukhubaza ukukhusela kunye ne-anti-virus kuya kuvumela i-hack ukuba isebenze ngaphandle komthungo, kwaye ukwala ukwenza njalo kunokubangela umba ngesixhobo. Imowudi yokusasaza iyafumaneka ukufihla iindlela zakho zokukhangela kubasasazi, kwaye isixhobo ngokwaso silula kakhulu ukusisebenzisa. Awudingi ukuba yingcali ukuze ufumane okuninzi kwi-Intel ye-DeadSide Intel, kwaye ungayidlala kwimowudi esigcweleyo! Olu luqhatho lwangaphakathi, kwaye lide lize ne-HWID Spoofer kubasebenzisi bethu abaye bavinjelwa izixhobo zekhompyutha ngaphambili.
Kutheni usebenzisa i-DeadSide Intel ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Abanye ababoneleli banenkxalabo malunga nokubeka inkohliso kunye nokuguqula inzuzo, kuba leyo yeyona njongo iphambili kuninzi lwabakhuphisana nathi. Sijolise ngqo ekwenzeni imali, njengoko ukubonelela abasebenzisi bethu ngezona cheats zibalaseleyo yinjongo yethu ephambili. I-Gamepron kuphela komboneleli wee-hacks ezifuna ukuba umsebenzisi onwabele amava abo, kwaye yile nto isenza ukuba sibe # 1 ukhetho kwi-intanethi! Kutheni ungazihlupha ngezinye ii-DeadSide cheats, ngelixa i-DeadSide Intel inayo yonke into oyifunayo? Zibophele kwisixhobo esiza kukunceda kube kanye!
Ukuba uyagula kwaye udiniwe kukusebenzisa kakubi i-DeadSide cheats, kulapho ungenza khona utshintsho. Imenyu yethu yomdlalo-inika umsebenzisi ulwenziwo olugqityiweyo lweseto sabo sokuqhekeza, okuthetha ukuba unokwenza nantoni na ongathanda ukuyenza. Khetha ukuba zeziphi izinto kunye nezixhobo ofuna ukususwa kwihlabathi, okanye uhlengahlengise isantya / ukuchaneka kwe-DeadSide aimbot yakho-inani elipheleleyo lezinto onokukhetha kuzo onokuzisebenzisa zinzima kwabanye! Funda iindlela zokukhangela ngokufanelekileyo usebenzisa isixhobo esikumgangatho ophezulu kuwo wonke umdlalo, thenga isitshixo semveliso ye-DeadSide Intel namhlanje, kwaye ubone ukuba iluncedo kangakanani kwimenyu yethu yomdlalo.
Ukuba uzama ukufumana isibonelelo esikhulu kukhuphiswano e-Deadside, ufumene indawo elungileyo. I-Deadside Intel Hack yethu ibonakaliswe ngokupheleleyo kwaye iya kukuvumela ukuba uchume kuyo yonke imidlalo yakho, nokuba ungadibana nabani.
Ukulungele ukwenza izinto phezulu inotshi? Ukufumana ukufikelela kwiiHacks zethu ezingasekhoyo namhlanje!
Ilindelwe Lawula kunye ne-DeadSide Intel Hack yethu?